मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु, दुईजना घाइते | Kendrabindu Nepal Online News
२९ मंसिर २०७६, आईतवार १७:४४
सिरहा । सिरहाको लहान–ठाडी सडकअन्तर्गत लहान नगरपालिका–२३ स्थित सडकमा दुईवटा मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किँदा एकको मृत्यु भएको छ भने दुईजना घाइते भएका छन् ।
उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउँदै गरेको स.३प. ५३१९ र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको स.६प. २६७६ नम्बरको मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किँदा स.३ प ५३१९ नम्बरको मोटरसाइकलका चालक लहान नगरपालिका–५ निवासी ४० वर्षीय सबिर अहमद नवाफको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते नवाफलाई उपचारका लागि लहान अस्पताल ल्याउँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृतकको शव लहानस्थित रामकुमार उमाप्रसाद स्मारक अस्पतालमा राखिएको छ ।
सोही दुर्घटनामा परी लहान नगरपालिका–२४ गोविन्दपुर निवासी २१ वर्षीय राहुल भण्डारी र स.६प. २६७६ नम्बरको मोटरसाइकल चालक लहान–२३ बथनाहा निवासी १८ वर्षीय रामशङ्कर यादव घाइते भएका छन् । घाइते दुवैलाई थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ । रासस
दुर्घटना, मोटरसाइकल चालक, लहान नगरपालिका, सिरहा
Prevनेकपा बैठककाे मुख्य एजेण्डा: विधान संशाेधनदेखि सीमाबाट भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गराउनेसम्म
नागरिकता कानुन विरुद्धको आन्दोलनमा ६ जनाको मृत्युNext